Shiinaha ahama warshad duudduuban biibiile steel iyo saarayaasha | Yuantuo
Qaabdhismeedka birta birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah: sida ku xusan habka wadista, waxaa loo qaybin karaa xariiqa korantada iyo khadadka duudduuban ee aan awoodda lahayn, sida ku xusan qaabka, waxaa loo qaybin karaa xariiqa rullaluistemadka gudbinta jiifka ah, xariiqa gudbinta rullaluistemadka leexashada iyo leexashada xariiqa duubista. Waxaa sidoo kale si gaar ah loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha si loo buuxiyo shuruudaha dhammaan noocyada macaamiisha.
Ballaca gudaha ah ee rullaluistemadka cabbirka heerka waa 100-2000mm, iwm Qeexitaanno kale oo gaar ah ayaa sidoo kale lagu qaadan karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Raadiyaha caadiga ah ee leexashada ee xariiqa rogaal celinta ayaa loo xisaabiyaa iyadoo loo raacayo qaaciddada, iyo qeexitaannada kale ee gaarka ah ayaa lagu qaadan karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka. Taxane rullaluistemadka ahama:
Waxay qaadataa birta kaarboon iyo birta birta ah sida dusha sare ee rullaluistemadka, iyo gudbinta gudbinta waxay qaadataa isku xirnaanta saxda ah ee isku dhafan oo ay sameysay shaabadda birta. Waxay leedahay faa'iidooyinka wareegga rogrogmi kara, dhalmada ballaaran (hal isugeynta rullaluistemadka waxay gaari karaan 20-100kg), hawlgal fudud iyo rakibid, kharashka maalgashiga qalabka yar, iwm, waxaana lagu dabaqi karaa wax soo saarka, baakadaha iyo geeddi-socodka gaadiidka ee warshadaha badankood iyo beeraha.
1. Duub maaddada iyo daaweynta dusha sare: birta kaarboonka (galvanized, chrome plated), birta birta ah, birta kaarboonka (dahaarka / polyurethane, dahaarka leh, la buufiyay), iwm dhererka usheeda dhexe ee rullaluistemadka, dhererka wax ku oolka ah ee jirka dhululubo, dhumucda derbiga tuubbada, iwm. loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha;
2. Birta kaarboonku ka kooban yahay mandrel adag, buluug zinc dahaadhay ama dahaadhka chromium, iwm, ama dhammaan waxyaabaha birta ka samaysan;
3. Foomka rakibidda usheeda dhexe waa la dooran karaa: nooca saxaafadda gu'ga, nooca birta ilkaha gudaha, nooca dunta dibadda, nooca tenon fidsan oo buuxa, iyada oo loo marayo nooca godka pin pinka;
Duubku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah
Ballaca: 25, 32, 38, 50, 60, 76
Mandrel waxaa loo qaybin karaa bir bir ah ama birta kaarboonka
Shuruudaha farsamada ee rullaluistemadka sprocket:
1. Xulashada walxaha dusha rullaluistemadka: birta birta ah ee birta galvanized, chrome plated, steel ahama, iwm dhererka usheeda dhexe ee rullaluistemadka, dhererka wax ku oolka ah ee jirka dhululubo, dhumucda derbiga biibiile, iwm ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha;
2. Mashiinka adag wuxuu ka samaysan yahay bir kaarboon ah oo lagu dhejiyay zinc buluug ah ama dhammaan birta aan lahayn. Mashiinka waxaa lagu dhejin karaa siyaabahan soo socda: nooca saxaafadda gu'ga, nooca godka ilkaha ee gudaha, nooca tenon ee fidsan iyo ilaa godka godka godka;
3. Kulan ka dib, rullaluistemadka isku bedbeddeli kara rogrogmi karo oo aan jamming;
4. Rullaluistemadka awoodda waxaa lagu wadi karaa hal silsilad silsilad ah ama laba silsilad silsilad ah. Giraangiraha silsiladda u dhigma, silsiladda giraanta, qaabka silsiladda: 06B / 08B / 10B, iwm waa la waafajin karaa.
Hore: Rubber dahaarka leh koofiyad gudbinta rullaluistemadka
Xiga: Rogista gawaarida gawaarida gawaarida